एसईईका विद्यार्थीको चिन्ता : आँधीसँगै उड्यो कापीकिताब, परीक्षा कसरी दिने ?
पर्सौनी – बारा जिल्लाको पर्सौनी खुटुवाका जगरनाथ पण्डितका छोरा राधेश्याम पण्डित आइतवार साँझ एसईईको परीक्षा तयारी गरिरहेका थिए । उनी पढ्दै गर्दा एकाएक साँझ पौने ७ बजे डरलाग्दो आँधीहुरी आएर घर नै भत्काइदियो । भएका कापीकिताब उडाएर लग्यो ।
नेपाल राष्ट्रिय मावि खुटुवाबाट एसईई परीक्षा दिइरहेका राधेश्यामको अहिले न घर छ, न कापीकिताब । उनी तनावमा छन् । ३ वटा विषयको परीक्षा दिइसक्दा प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि स्थगित भएको एसईईको परीक्षाको चिन्तामा छन् विद्यार्थी ।
‘स्थगित भएको परीक्षा २२ गतेदेखि शुरू हुँदैछ । तर म ३ दिनदेखि सुत्न पाएको छैन । कापीकिताब छैन, कहाँ बसेर पढ्नु, कसरी परीक्षा दिनु ?’ बुधवार बिहान घरको भग्नावशेषमा पुरिएका सामान खाज्दै गरेका राधेश्यामले भने ।
एसईईको तयारी गर्नुपर्ने राधेश्याम अहिले भोकभोकै बसेर भाइबहिनी स्याहारेर बसेका छन् । राधेश्यामसँगै नेपाल राष्ट्रिय माविका अर्का विद्यार्थी अब्दुल सलम अन्सारीको पीडा पनि उस्तै छ । एसईईको तयारी गरिरहेका उनको घर पनि हुरीले उडाएको छ । कापीकिताब कहाँ पुर्यायो भन्ने थाहा नै छैन ।
‘यस्तोमा कसरी पढेर के परीक्षा दिन सकिएला, कापीकिताब छैन, हामी सुतेका छैनौं,’ उनले लोकान्तरसँग गुनासो पोखे । आँधी प्रभावित क्षेत्रका विद्यार्थीले आफूहरूका लागि विशेष परीक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । हावाले आँखामा धूलो परेका कारण पढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनले दुखेसो पोखे ।
विद्यार्थी मानसिक तनावमा छन् : मेयर यादव
महागढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) उपेन्द्रप्रसाद यादवले आँधीहुरी प्रभावित क्षेत्र र आसपासका विद्यार्थी समेत मानसिक तनावमा रहेको बताए । ‘विद्यार्थीहरू मानसिक तनावमा छन् । घर छैन, विजुली छैन, कापीकिताब छैन कसरी परीक्षा देलान् ?’ यादवले लोकान्तरसँग भने ।
आँधीका कारण विद्युत् पोल ढलेका कारण बाराको अधिकांश स्थानमा बिजुली छैन । बिजुलीका तार लत्रिएका छन् । मेयर यादवले आँधीले क्षति गरेको बाहेकका स्थानमा पनि विद्यार्थीले राम्रोसँग पढ्न नपाएको बताए ।
४० क्विन्टल धानका भकारी कहाँ पुगे ?
पर्सौनीको खुटुवामा मानवीय क्षति कम भएपनि धेरै घरमा क्षति पुगेको छ । स्थानीय जीतेन्द्र साहका अनुसार आँधीले धेरैको धान लगायत घरमा रहेको खाद्यान्न नष्ट गरेको छ ।
‘धानका ठूला भकारी उडायो, धान कहाँ पुग्यो भन्ने थाहा छैन,’ साहले भने । नीर हसनको १५ क्विन्टल, अशोक पण्डितको १० क्विन्टल, शम्भु रामको ८ क्विन्टल धान हुरीले उडाएको साहले बताए । ‘भूइँचालो आएजस्तो भयो, एकछिनमा सारा धान उडाएर लग्यो,’ हसनले लोकान्तरसँग भने ।
गाउँमा कोही गयो कि मेरो नाम लेख्दिनु भन्छन्
आँधीहुरी प्रभावित कतिपय ठाउँमा राहत पुगेपनि कतिपय ठाउमा राहत सामग्री पुगेपनि कुनै गाउँमा पुगेको छैन । ‘हाम्रो गाउँमा धेरै मानवीय क्षति नभएपनि घर सबै उडाएको छ, हाम्रोमा त्रिपाल पनि आएको छैन,’ पीडित रामपुकार साहले भने ।
गाउँमा २ जनाको निधन भएको थियो भने कयौं घाइते भएका छन् । साना–ठूला गरेर १ सय ५० घर ढलेका छन् ।
गाउँमा नयाँ मानिस पुग्यो कि स्थानीयहरू ‘मेरो पनि नाम लेख्दिनुस्’ भन्दै आउँछन् । पीडितहरूले बर्खा शुरू हुनु अगावै घरको लागि व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
‘घर उडायो, २ कठ्ठामा लगाएको मसुरो पनि खत्तम गर्यो, हामी अब कसरी बाँच्ने ?’ वीरेन्द्र साहले भने ।